Kuyaphela ngomdlalo Isono
ABAKWA-BET sebekuqinisekisile ukuthi kuyaphela ngomdlalo Isono ngemuva kokuvela kwamahlebezi okuthi ukungenzi kahle kwawo uma kuziwza kubabukeli yikhona okube nomthelela ekupheleni kwawo. Isithombe: SIGCINIWE
Nokubongwa Phenyane | December 23, 2021
UZOTHULWA ngonyaka ozayo umdlalo omusha ozovala isikhala somdlalo Isono okuzothi kusasa ngo9.30, kukhonjiswe isiqephu sawo sokugcina.
Lo mdlalo uphela nje bese kuke kwavela ukuthi awenzi kahle uma kuza kubabukeli.
Lokhu kuphoqe ukuthi abanikazi bawo nabakwaBET bathathe isinqumo sokuwuqeda.
AbakwaBET esitatimendeni abasikhiphile baveze ukuthi lo mdlalo abawethule ngempumelelo, balindele ukuthi uphele ngegiya eliphezulu njengoba kuzokhonjiswa iziqephu ezimbili.
“Njengesiteshi iBET Africa sizoqhubeka nokugxila futhi sikhiqizele abantu base-Afrika izinhlelo ezihlonipha umuntu omnyama kuhlanganisa namasiko ethu. Sibheke phambili ke onyakeni u2022 nalapho isiteshi sethu sizokwenza izinguquko ezithize bese kuba khona nezimemezelo esizenzayo., sikhuthaza ababukeli bethu ukuthi bangadikibali abahlale nje belindile kukhulu kuyeza,” kusho isitatimende.
Baveze ukuthi eziqeshini zokugcina ezimbili izelamani zaKwaNdlovu uGabriel (Bohang Moeko) no-Esther (Didintle Khunou) bazohlangana njengoba befuna ukuqeda ngonina uMary Ndlovu (Nthati Moshesh).
“Laba bafuna ukuvezela umphakathi waseVosloorus ukuthi unina ungumuntu onjani ngempela. Okumele abantu bazibuze kona ukuthi ngabe lezi zelamani zizophumelela noma vele unina useyazi ngeqhinga lazo? Okunye okulindelwe ababukeli balo mdlalo ukuthi uMillicent (Natasha Thahane) afune ukwazi ngokwenzeka kumngani wakhe uNoluthando (Ayanda Nhlapo) owavele wanyamalala, nagcina etholile ukuthi ubani onesandla ekunyamaleleni kwakhe, njengoba esetholile ukuthi yini azoyenza ngalokhu,” kusho isitatimende.
Kuvela lezi zindaba nje, aseqalile ukusabalala amahlebezi okuthi umdlalo iThe Estate, kuSABC3 nawo kunezinhlelo zokuthi uqedwe.
Lo mdlalo osukhonjiswa nakuSABC1, kuvela ukuthi nawo awenzi kahle uma kuza kubabuleli, nokuphoqe ukuthi uqedwe.
Omunye umdlalo osekuqinisekisiwe ukuthi uyaphela othi Legacy, kuM-Net nozogcina ukubonakala kulesi siteshi ngoSepthemba.